Mara ọkwa na ọnọdụ ojiji 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Iwu mara na ọnọdụ ojiji
A tụlere akwụkwọ na 15 / 05 / 2020
Ọ bụrụ na ị bịarutere ebe a, ọ bụ na ị na-eche banyere azụ ụlọ nke weebụsaịtị a na okwu m họọrọ isoro gị mee ma nke a bụ nnukwu ozi maka m, dị ka ọ dịịrị maka websaịtị a.
Ihe kpatara ederede a bụ ịkọwa n'ụzọ zuru ezu arụmọrụ weebụsaịtị a ma nye gị ozi niile metụtara onye na-elekọta ya na ebumnuche nke ihe ndị dị na ya.
Onye Nchọpụta Arụ Ọrụ
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịmara onye na - elekọta webụsaịtị a. N'ikwekọ na Iwu 34/2002, nke July 11, na ọrụ nke ozi ọha na azụmaahịa azụmahịa, ọ na-agwa gị:
Aha ụlọ ọrụ bụ: Jorge Bardales
• Aha ụlọ ọrụ dị na C / Tórtola n-7 18014 (Granada)
• Ọrụ mmekọrịta bụ: Web ọkachamara na ọtụtụ ọzụzụ nke ịre ahịa n'ịntanetị.
Ebumnuche nke weebụsaịtị a
Nye ọdịnaya metụtara ọrụ Onlinentanetị.
• Jikwaa ndepụta ndị debanyere aha nke blog ahụ na azịza dị nzi.
• Jikwaa ọdịnaya na ọrụ nke ọrụ ndị enyere.
• Jikwaa netwọk nke ndị mmekọ metụtara.
• ọrụ nke ndị ọzọ n'ahịa.
Mgbe ị na-eji ebe nrụọrụ weebụ emulator.online, Onye ọrụ kwenyere na ọ gaghị eme omume ọ bụla nke nwere ike imebi ihe oyiyi, ọdịmma na ikike nke emulator.online ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere ike imebi, gbanyụọ ma ọ bụ bufee weebụsaịtị emulator. n'ịntanetị ma ọ bụ nke ahụ ga - egbochi, n'ụzọ ọ bụla, ojiji nke web.
emulator.online na-agbaso usoro nchebe zuru oke iji chọpụta ịdị adị nke nje. Agbanyeghị, Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịmara na usoro nchekwa nke sistemụ kọmputa na ntanetị abụghị ihe a pụrụ ịtụkwasị obi kpamkpam yana, ya mere, emulator.online enweghị ike ịkwado na enweghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ibute mgbanwe na sistemụ kọmputa. (sọftụwia na ngwaike) nke Onye ọrụ ma ọ bụ na akwụkwọ elektrọnik na faịlụ ndị dị n'ime ya.
N'ọnọdụ ọ bụla, amachibidoro ndị USERS (inwe ike ihichapụ ọdịnaya na ihe o chere na o kwesịrị ekwesị) na-akpa akparamagwa gụnyere:
Chekwaa, bipụta na / ma ọ bụ bufee data, ederede, onyonyo, faịlị, njikọ, sọftụwia ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ dị njọ dị ka usoro iwu dị si dị, ma ọ bụ site na atụmatụ nke emulator.online maka ịbụ onye iwu na-akwadoghị, ime ihe ike, iyi egwu, mkparị, nkwulu, okwu rụrụ arụ. , okwu rụrụ arụ, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpọ asị ma ọ bụ ndị ọzọ na-asọ oyi ma ọ bụ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nke ahụ nwere ike imebi ụdị ọ bụla, ọkachasị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Ọrụ Onye Ọrụ
Dịka onye ọrụ, a gwara gị na ịnweta weebụsaịtị a apụtaghị, n'ụzọ ọ bụla, mmalite nke mmekọrịta azụmahịa na Jorge Bardales n'ụzọ dị otu a, onye ọrụ ahụ kwenyere iji weebụsaịtị, ọrụ ya yana ọdịnaya na-enweghị imebi iwu ugbu a, ezi okwukwe na usoro ọha na eze. Ojiji nke weebụsaịtị maka ebumnuche na-ezighi ezi ma ọ bụ na-emerụ ahụ, ma ọ bụ nke ahụ, n'ụzọ ọ bụla, nwere ike ịkpata mmebi ma ọ bụ gbochie arụmọrụ nke weebụsaịtị ahụ amachibidoro.
Banyere ọdịnaya nke weebụsaịtị a, amachibidoro:
Mmeghari ya, nkesa ya ma ọ bụ mgbanwe ya, na akụkụ ma ọ bụ akụkụ ya ụfọdụ, ọ gwụla ma ikike ndị nwe ya ziri ezi;
• mmebi iwu ọ bụla nke onye na-eweta ya ma ọ bụ nke ndị nwe ya ziri ezi;
• Ojiji maka azụmahịa ma ọ bụ ebumnuche mgbasa ozi.
Mkpuchi data na nzuzo nzuzo
Jorge Bardales na-ekwe nkwa nzuzo nke data nkeonwe nke ndị ọrụ na ọgwụgwọ ha nyere dị ka iwu dị ugbu a maka nchebe nke data nkeonwe, ịnakwere ọkwa nchekwa chọrọ nke nchekwa nke data nkeonwe.
Jorge Bardales na-amalite iji data etinye na faịlụ "WEB Users AND SUBSCRIBERS", ịkwanyere nzuzo ha ma jiri ha mee ihe kwekọrọ na nzube ya, yana irube isi na ọrụ ya ịzọpụta ha ma gbanwee usoro niile Iji zere mgbanwe, ọnwụ, ọgwụgwọ ma ọ bụ nnweta na-enwetaghị ikike, dịka ndokwa nke Royal Decree 1720/2007 nke Disemba 21, nke kwadoro Iwu maka mmepe nke Iwu Organic 15/1999 nke Disemba 13, Nchedo nke Ozi Nkeonwe.
Onye ọrụ nwere ikike ịkagbu nkwenye mbụ ha n'oge ọ bụla.
Onye ọrụ ahụ nwere ike igosipụta, gbasara data anakọtara, ikike a ghọtara na Iwu Organic 15/1999, nke nnweta, ndozi ma ọ bụ kagbuo data na mmegide. Iji gosipụta ikike ndị a, onye ọrụ ahụ ga-edebanye aha ya ma debanye aha ya na ha nwere ike iziga, yana foto nke NJ ha ma ọ bụ akwụkwọ njirimara ha nhata, na adreesị ozi-e nke Jorge Bardales (ya bụ, C / Tórtola n-7 18014 (Granada)) ma ọ bụ site na email, tinye foto nke ID iji: info (na) emulador.online. Tupu ụbọchị iri, a ga-aza arịrịọ a iji kwado mmezu nke ikike ị rịọrọ ịme.
Jorge Bardales na-agwa na enwere ụdị mkpesa dị maka ndị ọrụ na ndị ahịa.
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịme nkwupụta site na ịrịọ maka ụdị nkwupụta ha ma ọ bụ site na izipu ozi email na info (na) emulador.online na-egosi aha na aha nna gị, ọrụ ahụ ma ọ bụ ngwaahịa zụtara yana ịkọwa ihe kpatara nkwupụta gị.
I nwekwara ike iduzi ihe ị na-ekwu site na nzipu ozi zigara: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (Granada) n'iji, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ụdị nkwupụta ndị a:
Gaa: Jorge Bardales
C / Tortola n-7 18014 (Granada)
E-mail: Ama (na) emulator.online
• Adreesị onye ọrụ:
• Nbanye onye ọrụ (naanị ma ọ bụrụ na egosipụtara ya na akwụkwọ):
• Ihe kpatara nkwuputa:
Site na Ọnọdụ General ndị a, enweghị ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike ụlọ ọrụ na-enye aka na emulator weebụ.online nke ihe ọgụgụ isi ya bụ nke Jorge Bardales, mmeputakwa, mgbanwe, nkesa, nkwukọrịta ọha na eze, na-eme ka ọha na eze mara, amachibidoro onye ọrụ ahụ mmịpụta. , jigharị, ebugharị ma ọ bụ iji ụdị okike ọ bụla, n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ usoro, nke ọ bụla n'ime ha, belụsọ n'okwu ndị ikike nke iwu kwekọrịtara ma ọ bụ nye ikike.
Onye ọrụ ahụ maara ma nabata na ebe nrụọrụ weebụ ahụ dum, nke nwere ederede na-enweghị mmachi, ngwanrọ, ọdịnaya (gụnyere ihe owuwu, nhọrọ, nhazi na ngosipụta otu) foto, ihe ndị a na-ahụ anya na usoro nri, site na ụghalaahịa, ikike nwebiisie. na ikike ndị ọzọ nwere ikike ịdenyere aha, dị ka nkwekọrịta mba ụwa nke Spain bụ otu na ikike ikike na iwu ndị ọzọ nke Spain.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ma ọ bụ nke atọ ewere na mmebi iwu ikike ikike ọgụgụ isi ha ziri ezi n'ihi iwebata ụfọdụ ọdịnaya na Weebụ, ha ga-agwa Jorge Bardales banyere ọnọdụ a na-egosi:
Gosipụta ọdịnaya echekwara site na ikike ikike ọgụgụ isi na ọnọdụ ha na Weebụ, nzere ikike ikike ọgụgụ isi gosipụtara yana nkwupụta nke ndị nwere mmasị na-ahụ maka izi ezi nke ozi enyere na ngosi.
Jorge Bardales na-ajụ ọrụ ọ bụla gbasara ozi achọtara na mpụga weebụsaịtị a, ebe ọrụ nke njikọ ndị na-egosi bụ naanị ịgwa Onye ọrụ banyere ịdị adị nke isi mmalite ozi ndị ọzọ na otu isiokwu. Apụrụ Jorge Bardales site na ọrụ niile maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke njikọ ndị dị otú a, nsonaazụ enwetara site na njikọ ndị a kwuru, eziokwu na iwu nke ọdịnaya ma ọ bụ ozi nwere ike ịnweta, yana mmebi nke Onye ọrụ ahụ nwere ike ịta ahụhụ. site na ozi achọtara na weebụsaịtị ejikọtara.
Jorge Bardales anaghị enye nkwa ọ bụla ma ọ bụ na ọ nwere ọrụ, n'ọnọdụ ọ bụla, maka mmebi nke ụdị ọ bụla nke nwere ike kpatara:
• ịdị adị nke nje virus, mmemme na-emerụ ahụ ma ọ bụ nke na-emerụ ahụ n'ime ọdịnaya;
• Zighi ezi, akpachapụghị anya, wayo ma ọ bụ na-emegide Iwu Iwu a;
• Enweghị iwu, ogo, ntụkwasị obi, ịba uru na nnweta nke ọrụ ndị ọzọ enyere ma mee ka ndị ọrụ websaịtị ahụ.
Ndị ọrụ na-eweta ịkwụ ụgwọ n'ọnọdụ ọ bụla maka mmebi nke nwere ike ibilite na iwu akwadoghị ma ọ bụ jiri nke weebụsaịtị a.
Na mkpokọta, mmekọrịta dị n'etiti emulador.online na Ndị ọrụ nke ọrụ telematic ya, nke dị na weebụsaịtị a, dị n'okpuru iwu na ikike Spanish na ikike na urtslọikpe Granada.
Ọ bụrụ na Onye ọrụ ọ bụla nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọkwa iwu a ma ọ bụ okwu ọ bụla na web emulator.online, ha nwere ike ịga na ozi (na) emulador.online.
emulator.online nwere ikikere iji gbanwee, n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa, ngosi na nhazi nke web emulator.online, dị ka ọkwa iwu a.
Onye ọrụ ahụ kwenyere ịghara ime omume ọ bụla nke nwere ike imebi ihe oyiyi, ọdịmma na ikike nke emulator.online ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere ike imebi, gbanyụọ ma ọ bụ bufee web emulator.online ma ọ bụ nke ga-egbochi, n'ụzọ ọ bụla, eji weebụ eme ihe.